OBC 48v 60v 72v bateria cha ...
Ao amin'ny mpamaky fiara 48v 72v 96 ...
DCNE-miovaova famerenam-potoana familiana mpamaky pulse-Hot Products
DCNE miovaova matetika ny mpamaky pulse charger andian-dahatsoratra mampiasa "superposition mitambatra fampidirana haingana haingana sy famoahana teknolojia" ary "fanaraha-maso mandeha ho azy voapetraka lalàna famoahana sy famoahana dingana vaovao", dia afaka manatsara be ny fahombiazan'ny famerana sy ny kalitao, mampihena be ny fotoana famerana, manitatra tsara ny bateria fiainana, manavao ny toetran'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra, ary mahatsapa ny "fahombiazana lehibe, fiarovana ny tontolo iainana ary ny fitsitsiana angovo".
6.6KW OBC miaraka amina bateria PFC cc cv 144V 198V 320VDC
tsy misy rano matevina amin'ny sambo 72v 60 amp 50 amp 80 amp lifepo4 charger lithium
Mora ampiasaina, azo antoka ary marani-tsaina. Fantaro ho azy ny karazana bateria sy ny herinaratra aorian'ny fampifandraisana ilay bateria. Tsy ilaina ny manitsy tanana ny volt ary ny ankehitriny, ary hikatona ho azy aorian'ny famenoana azy tanteraka.
48v 72v 80v 96v 144v 312v 6600w EV amin'ny lozisialy charger LFP / NCM charger miaraka CAN
Ny bateria-asidra mitarika asidra dia tsy afaka manana asan'ny BMS sy CAN; ny bateria lithium dia manana BMS. Araka ny filan'ny mpanjifa, safidio raha manana CAN ny fifandraisana amin'ny charger.
Ireo karazana bateria mifandraika indrindra:
Lifepo4,18650, bateria ionithium
Mpanamboatra ambongadiny 48v 72v 96v 144v 312v lifepo4 / charger batterie li-ion 3300w amin'ny charger board
Amin'ny fampiasana masontsivana fanaraha-maso puce tsy miankina, famaritana mandeha ho azy ny bateria lithium, famandrihana mifanentana amin'ny iray. Arovy tsara ny bateria AGM, bateria lifepo4.
CAN azo atao ny manitsy ny protokolan'ny serasera sy ny bateria BMS docking, ny herinaratra, ny fotoana ankehitriny ary ny fanidiana. Mitondrà fampiononana bebe kokoa ho an'ny mpanjifa.